बाबुरामको प्रश्न: मैले बोलेँ भने डलर खाएर बोल्यो भन्छन्, हिन्दु धर्म किन स्वीकार्नुहुन्छ ? – ताजा समाचार
भट्टराईले भने- मैले बोलेँ भने डलर खाएर बोल्यो भन्छन् । यसमा तपाईंहरु बोल्नुपर्छ । पाप लाग्छ भने मलाई लागोस् तर तपाईंहरु हिन्दू धर्म किन स्वीकार गर्नुहुन्छ ? त्यसमा सुधार हुँदैन भने तपाईंहरुले किन मान्ने ? अम्बेडकर आफैं हिन्दू भएर जन्मिए, तर जातीय विभेदका कारण मर्ने बेलामा बुद्ध धर्म अँगाले । – अनलाइन खबरबाट